wardeeq.com oo heshay Xogo qarsoon oo la xariira Hardanka Doorashada Somalia Ee 2016 | Wardeeq.com
XOG: Dowlada Bixisay Lacagtii ku Baxday Dacwada Badda Soomalia oo La Ogaaday…
Dowladda Turkiga Oo Taageero Muhiim Ah Siineysa Musharrax Caan Ah
DHAGEYSO: Wasiir Odawaa oo shaaciyey waxa uu xasan sheekh ku yiri markii la bilaabayey dhiasmaha hiiraan iyo shabeelada dhexe..
DE DEG: Ciidamadii La Wareegay Bangiga Puntland oo Malaamiin Doolar Kala Baxay Bangiga Iyo Madaxda Puntland oo Ka Murugootay..
DHAGEYSO: Guddomiyaha Degmada Marka oo Ka Hor Yimid Shir Looga Hadlayey Amanka Magalada Marka oo Muqdisho Lagu Qabtay…
DHAGEYSO: Maxay dowlada Soomaaliya ka qaban kartaa Cunto yarida ka jirta Dalka ?
FADEEXAD+DHAGEYSO: Xildhibaanada Hiiraan Iyo Sh/Dhexe oo Muqdisho Lagu Soo Xulaayo+Ugaas Xasan oo Seefta Gasha Kala Baxay..
Sheekh Shariif oo Xil Culus u Magacaabay Yuusuf Indhacadde
XOG: Xilka uu Dowlada Cusub Ka Qaban Doono Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid oo La Ogaaday…
XOG: Madaxweyne Gaas iyo Madaxweyne Shariif Xasan oo isku khilaafsan waqtiga Doorashada
Home Wararka wardeeq.com oo heshay Xogo qarsoon oo la xariira Hardanka Doorashada Somalia Ee 2016
wardeeq.com oo heshay Xogo qarsoon oo la xariira Hardanka Doorashada Somalia Ee 2016
cubeyd nuurJun 18, 2016Wararka0 Like wardeeq waxay heshay xogo la xariira sidda ay Hogaamiyaasha Siyaasadda ee Soomaalidu ugu hardamayaan xulida xubnaha golayaasha dawladda Faderaalka ee la dhisi doono iyo dagaalka adag ee ay dhinacyadu ugu jiraan Kuraaska ugu sareysa dalkan.
Madaxda DFS & Guddiga Doorashada?
In la magacaabo guddi Doorasho oo ay dhinacyadu leeyihiin, waxay arintan keentay in uu dhinac kasta uu xooggiisa goor hore-ba halkaas ku tijaabsho, waxaana xubnaha dawlad gobaleedyada ka yimid ay yihiin kuwa ay ku kalsoon yihiin Madaxda dawlad gobaleedyada.
Madaxweynaha, Ra`iisulwasaaraha & Afhayeenka baarlamaankuba waxaa la rumeysan yahay in ay yihiin musharaxiin, goor hore Xassan Sheekh Max’uud & Jawaari waxayba sii bilaabeen tartanka iyo howlaha doorashadan.
Guddiga VS 4.5
Sadexduba mid hal xubin oo u gaar ah ayay leeyihiin, sidaas oo kalena shanta guddiga Wasiiradda ah, waxay lakala safan doonaan Madaxda dawladda, maadaama ay hadda ku fadhiyaan Kuraasta Nidaamka loo yaqaano 4.5 oo ah midka ay hadda ku dhisan tahay dawladda Soomaaliya.
Damaca Jawaari & Diidmada Shariif Xassan!!
Jawaari wuxuu doonayaa in uu mar kale ku soo laabto Kursiga baarlamaanka, uuna u tartamo gudoomiyaha baarlamaanka dalka, balse Shariif Xassan Sheekh Aadan oo hadda saameynta ugu badan ku leh Xildhibaanada ka imaanaya Baay & Bakool oo ah kuwa hardanka ugu badan ka dhici doono.
Shariif Xassan wuxuu ciyaarayaa kaartooyin siyaasadeed oo adag, wuxuuna doonayaa in aysan beeshiisu hadda noqon gudoomiyaha baarlamaanka, taas bedelkeedana wuxuu doonayaa in siyaasi ka soo jeeda Beesha Daarood uu noqdo gudoommiyaha baarlamaanka Faderaalka, si beesha gobalada Baay & Bakool u helaan mid kamid ah Xaafiisyada Madaxweynaha ama Ra`iisulwasaaraha dawladda Faderaalka.
Shariifka laguma yaqaan siyaasi si fudud looga guuleysto, wuxuuna hadda awoodba u leeyahay in uu yeesho xulida xubnaha Beelaha Digil & Mirifle oo ah kuwa uguu badan ee tartanka adag loogu jiro.
Prof Jawaari oo uu xifaltan adag kala dhaxeyso Shariif Xassan Sheekh Aaden wuxuu hadda joogaa Baydhabo oo uu maanta tagey, isagoo doonaya in uu ugu yaraan Xildhibaanada Beesha Digilka Saameyn ku yeesho.
Heshiiska Cali Khaliif & Shariif Xassan?
Warar soo gaaray Warqaad press waxay cadeynayaan in Prof Cali Khaliif Galeyr oo hadda sheegta Madaxweynaha Khaatumo oo kusugan miyiga Buuhoodle, uu doonayo in uu xubin ka noqdo Aqalada sare ama Hoose ee baarlamaanka Faderaalka, ka dibna uu doonayo in uu isku soo taago mar kale gudoomiye baarlamaan, iyadoo horey looga guuleystay 2012-ii.
Cali hadda wuxuu ciyaarayaa doorkaas, isagoo la aaminsan yahay in uu taageero ka haysto oo ay wada hadal horey u yeesheen Shariif Xassan Sheekh Aadan (Madaxweynaha Koonfur Galbeed), oo hadda doonaya in aysan beeshiisu helin Gudoomiye-nimada baarlamaanka.
Lama garanayo sida ay ugu sahlanaan doonto Cali Khaliif in uu ka mid noqdo Baarlamaanka ama Aqalka Sare, maadaama Xildhibaanada ka soo jeeda Puntland doorashadoodu ka dhici doonto caasumada Puntland oo uu hadda Cali u muuqdo mid aan ku qanacsaneyn.
M/weyne Xassan Sheih VS Xildhibaanada cusub!!
Madaxweyne Xassan wuxuu in uu helo tiradda ugu badan ee Xildhibaanada ka imaanaya Jubbaland, Puntland, Galmudug, Gobalada Hiiraan & Shabeelaha Dhexe, taas oo aan la garan Karin sidda ay ugu sahlan doonto.
Madaxweynuhu wuxuu xiriir wanaagsan hadda la leeyahay Galmudug, Jubbaland iyo labada gobal ee Hiiraan & Shabeelaha Dhexe, waxaana warar aan la xaqiijin ay sheegayaan in Puntland sidaas oo kale uu Xassan Sheikh xooga saarayo hadda
Puntland & Doorashada 2016?
Puntland waxay ciyaaraysaa door weyn, waxaana ay Madaxda dawladda Puntland & Siyaasiin badan oo kusugan guduhu ay doonayaan in ay soo saaraan Shaqsi wax ka qaban kara xaaladda dalka, oo lasiin doono inta badan 40 Xildhibaan ee ka imaanaya gobalada Puntland.
Saadaalin weyn lagama bixin karo shaqsiyaadka ka soo jeeda Puntland ee hoggaanka dawladda Faderaalka isku soo taagi doona, marka laga reebo ilaa hadda labo musharax oo ku dhawaaqay M/weynihii hore PL Faroole & wasiirkii Qorsheynta Xariirka caalamiga ah ee dawladda Faderaalka Siciid Cabdulaahi Denni.
Laakiin xogaha Warqaad Press ay heshay waxay cadeynayaan in Puntland ay yeelan doonto koox isku xiran oo Xildhibaano labada aqal ah, lagana yaabo in codkooda ay meel ku mideeyan, taas oo ah midda welwelka ugu badan ku heyn doonta Siyaasiinta Soomaalida ee ku jirta tartanka adag.
Puntland VS Sheekh Shariif Sheekh Axmed?
Xogo kale oo laga helayo dhinaca Hoggaamiyaha xukunka & Siyaasadaba dibad jooga ka ahaa Sheikh Shariif Sheikh Axmed waxay sheegayaan in ay kulmeen Madaxweynaha Puntland & Madaxweynihii hore oo ay ka wada hadleen sidii ay iskaashiga u yeelan lahaayeen, hase ahate ilaa hadda dhinacyadan kama aysan hadlin waxyaabihii ay sidda hoose uga wada hadleen, marka laga reebo in ay cadeeyeen in laga wada hadlay oo kaliya dhinaca Siyaasadda.
Waqtiga dhamaanaya & Dagaalka Siyaasadeed!
Warqaad Press ayaa fahamsan in ay Madaxda Madasha Wadatashigu ay hadda kala ciyaarayaan doorar muhiim ah, ayna hadda Madaxda dawladda Faderaalku yihiin kuwa kujira marxaladii u dambeysay, maadaama ay ku jiraan xili kala guur ah oo ay qolo kasta doonayso in ay yeelato saameynta Siyaasadeed.
Laakiin Hoggaamiyaasha dawlad gobaleedyada, gaar ahaana kuwa aan ilaa hadda la og yahay in aysan aheyn Musharaxiin madaxtinimo waxay doonayaan in ay yeeshaan saameyn weyn oo ay gorgortan adag kula gali doonaan Madaxda dawladda Faderaalka ee Soomaaliya.
Doorashadda hadda loo durbaan tumayo waqtigeeda ayaa ah mid dhaw, waxaana naga xigta oo kaliya 60 cisho oo kaliya, waxaana la doonayaa in la qabto howl weyn oo ay ka mid yihiin dhismaha golayaasha labada Aqal oo qaadan doonta hadda sida muuqata waqti dheeraad ah.
Adeegsiga Lacagaha xiliga doorashada & Bilowga Muuqda!!
Goor hore saadaalin ayaa laga bixiyey in lacago badan loo isticmaali doono hanaanka doorashada, Warqaad Press waxay heshay xog cadeysa in ay Madaxda dawladda Soomaaliya qaarkood hadda bixinayaan lacag dhan $20,000 oo lasiinayo shaqsiyaadka ay u arkayaan in ay xubno ka soo noqon karaan labada Aqal oo ay beelahooda Xubinimo ka soo dhacsan karaan.
2012-kii waxyaabaha lagu xasuusto waxaa kamid ahaa Lacagta oo Si toos ah codadka loogu kala gadanayey, taas oo noqotay dhaqan sannadyadii u dambeeyey laga isticmaalayey Goob kasta oo Soomaaliya kamid ah, Muqdisho ayaa aad looga hadal hayaa Oraahda ah ” In aad Taajir noqotaa Xildhibaanimo ayaa kaa xigta” taas oo ah mid ay hadda aad u hadal hayaan Siyaasiinta Soomaalida.
Suuragal ma tahay in ay Baaqato Doorashadu?
Beesha Caalamka & Daneeyaasha Siyaasadda Soomaalidu-ba waxay si isku mid ah u qabaan dareenka walaaceed ee ah in ay dib u dhacdo doorashadu, taas oo haddii ay dhacdo ay Beesha Caalamku qaadan doonto doorkeeda ugu badan oo ah in aan doorashadaas marnaba dib loo dhigi doonin.
Ilaa hadda waxa kaliya ee u muuqda Shacabka Soomaaliyeed ayaa ah xarig jiidka Siyaasadeed ee u dhaxeeya Madaxda Siyaasadda Soomaaliya & Isim kasta oo doonaya in uu yeesho saxiixa Xildhibaanada labada aqal, taas oo banaanka soo dhigi doonta wajiga dhabta ah ee Siyaasiinta Soomaalida.
Previous Postwar deg deg ah: Puntland oo dil toogasho ku xukuntay 43-ruux ka mid ahaa Maxaabiistii Al-Shabaab
Next PostDaawo Video:Madaxda Caalamka Kuwooda ugu Anshaxa & Borotokoolka Xun + Video
XOG: Dowlada Bixisay Lacagtii ku Baxday Dacwada Badda Soomalia oo La Ogaaday… Cabdishakuur ShaashaaSep 26, 2016 Dowladda Turkiga Oo Taageero Muhiim Ah Siineysa Musharrax Caan Ah cubeyd nuurSep 26, 2016 DHAGEYSO: Wasiir Odawaa oo shaaciyey waxa uu xasan sheekh ku yiri markii la bilaabayey dhiasmaha hiiraan iyo shabeelada dhexe.. Cabdishakuur ShaashaaSep 26, 2016 Leave a Reply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website Notify me of follow-up comments by email. Notify me of new posts by email.	FIKRADAHA DADWEYNAHA	Loading... Nagala Soco Facebook	Nagala Soco Facebook